Na-azụ + Ikuku: Air France na-ekwenyeghachi na ntinye aka na nkwado gburugburu ebe obibi
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na France » Na-azụ + Ikuku: Air France na-ekwenyeghachi na ntinye aka na nkwado gburugburu ebe obibi
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • investments • News • Rail njem • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ka ndị njem na-achọwanye nhọrọ ndị njem njem enyi na gburugburu ebe obibi, Air France na-echebe ego ọ ga-enweta n'ọdịnihu site na ịtọlite ​​azịza bara uru.
Air France na-agbasawanye mmemme ya 'Zụọnụ + Ikuku'.
Mgbasawanye ụgbọ elu nke France na-egosi nnukwu ihe ndị ụgbọelu na-eme iji belata ikuku anwụrụ.
Air France ekpebiela ịbelata ikuku anwuru nke ụlọ ya site na 50% site na 2025 site na ọkwa 2019.
Na-adịbeghị anya mgbasa Air FranceMmemme 'S' Zụọnụ + Ikuku 'na-eme ka mkpebi siri ike ya maka nkwado gburugburu ebe obibi. Ka ndị njem na-achọwanye njem ndị ọzọ na-eme ka gburugburu ebe obibi dị mma, ụgbọ elu na-echebe ego ọ ga-enweta n'ọdịnihu site na ịmepụta ihe ndị bara uru.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị atụmatụ ọhụrụ, mmụba nke Air France na-egosi nnukwu ihe ndị ụgbọelu na-eme iji belata ikuku carbon. Air France etinyela aka n'ibelata nsị ụgbọ elu nke ụlọ ya site na 50% site na 2025 site na ọkwa 2019 ma usoro ndị a dị mkpa iji nweta nke a. A gbakwunyere ụzọ asaa ọzọ na 18 ugbu a enwere ike ịgba akwụkwọ. Na-enye otu tiketi, isi iguzosi ike n'ihe, na nchebe njikọ, ụgbọ elu ahụ emeela ka usoro ihe omume gburugburu ebe obibi mara mma nke ukwuu maka ndị njem, ma na -emepụta usoro njem njem nke kwesịrị ekwesị maka ọdịnihu.
Ndị ahịa na-enwewanye mmetụta na ngwaahịa na ọrụ dị mma na gburugburu ebe obibi. Industrylọ ọrụ Q1 2021 Consumer Survey gosipụtara na 76% nke ndị na-aza ajụjụ zuru ụwa ọnụ bụ 'mgbe niile', 'mgbe mgbe', ma ọ bụ 'mgbe ụfọdụ' na-emetụta ihe a, na-arị elu ruo 78% n'etiti ndị na-aza French.
Air France Achọpụtala ohere dị ukwuu nke ndị njem ga-agbanwe gaa njem ndị ọzọ na-eme ka gburugburu ebe obibi dị mma na ụzọ dị mkpirikpi, ọkachasị ụgbọ okporo ígwè, ebe ọ bụ na ụgbọ elu na-eme ka ụgbọ elu enwee ike ịmalite Europe. Atụmatụ ụlọ ọrụ a ga-akwụ ụgwọ dị iche iche na ichebe ihe oyiyi ụgbọelu maka afọ ndị na-abịa, ebe ịbelata ọrụ ọ na-efe.
Ọtụtụ ụzọ ụgbọ ogologo ụgbọelu na-adabere na nri ụlọ site na ọdụ ụgbọelu mpaghara, atụmatụ a na-ekwenyekwa na ọ gaghị efu ndị njem a dị ezigbo mkpa. Site na ịme ihe n'usoro nkwado nke nkwado, onye na-ebu ya ga-eme ka ọnụnọ siri ike na omume a tupu ndị asọmpi ya wee nwee ike ịbụ onye ọrụ njem ụgbọ njem nke France.
Travelgbọ njem ụgbọ okporo ígwè bụ njem njem njem nke abụọ kachasị ewu ewu, n'azụ ụzọ, maka njem ụlọ n'ime France na 2019 jiri 17.4% (29.3 nde) nke njem. A na-ebu amụma ya na site na 2025 okporo ígwè ga-abụ 18% nke njem ụlọ, na-agụta njem njem 31.4.
Rail njem enwetawo ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya, yana nnukwu netwọk ọsọ ọsọ gafee France, ọ ga-ewu ewu karịa. Ebe ọ bụ na ahịa dị mkpụmkpụ ga-eburu nnukwu nsogbu na afọ ndị na-abịanụ, ọkachasị na gọọmentị France na-egbochi mmachibido iwu ụfọdụ ụlọ, usoro amamịghe a ga-ahụ na elere Air France anya dị ka onye ndu njem ụgbọ ala. Mgbasawanye na mmemme 'Air + Rail' nke Air France na-eme ka usoro ihe omume ụgbọ elu na-eme dịkwuo mma na gburugburu ebe obibi, ma na-ekwe ka ụlọ ọrụ ahụ bụrụ ihe na-aga n'ihu nke na-eche banyere nkwado.
Ihe nzuzo zoro ezo na India: Quaint Jaisalmer
Choputa mmasi nke ọdụ ụgbọ elu Frankfurt